‘द ब्रेक अप’मा युवी थापाको ड्रेस फालियो आशिरमान, सलोन र शिल्पा पोखराको सपिङ मल चाहार्दैFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
‘द ब्रेक अप’मा युवी थापाको ड्रेस फालियो
आशिरमान, सलोन र शिल्पा पोखराको सपिङ मल चाहार्दै
फिल्मी फण्डा । पोखरामा सुटिङ भईरहेको फिल्म द ब्रेक अप बाट गोप्य खबर बाहिरिएको छ । फिल्मको सुटिङ अगाडी नै सबै कलाकारहरुको लागि कस्टोम डिजाईनरलाई भनेर ड्रेसहरु तयार गरेका थिए । जब फिल्मका टिम सुटिङको लागि पोखरा पुग्यो सुटिङ शुरु हुन सकेको थिएन । त्यसको एक मात्र कारण थियो कलाकारलाई ड्रेस मन नपर्नु । नेपालको ठूलै ड्रेसमाम्यानले तयार पारेको कस्टोम फिल्मका कलाकारले लगाउन मानेनन्, त्यसपछि तुरुन्तै ड्रेसको खोजीमा निर्माण पक्ष लाग्नुपरेको थियो ।
फिल्मका निर्माण पक्षलाई लिएर कलाकार टिम पोखराका प्राय अधिकांश सपिङ मलहरु चाहारेका थिए । सपिङ मलबाट आवश्यक ड्रेसहरु कलाकारले छानेका थिए । आवश्यक ड्रेसहरु छानिसकेपछि फिल्मको सुटिङ धमाधम भईरहेको छ । यसले कलाकारलाई त खासै असर परेन तर फिल्मका निर्माताहरुलाई धेरै असर परेको छ । यस्तै सबैभन्दा बढि असर नेपालका ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका ड्रेस डिजाईनर युवी थापा मगरलाई परेको छ ।
उनले कस्तो ड्रेस डिजाईन गरेको थियो जुन कलाकारहरुले एउटा पनि लगाउन मानेनन् । युवी थापा मगरको ड्रेस जुन फिल्मको लागि भनेर डिजाईन गरियो त्यो फिल्ममा प्रयोग नहुनु भनेको उनको लागि अहिले सम्मकै दुर्भाग्य सावित भएको छ । के उनी डिजाईन मा अलमलिएका नै हुन् त ? या अब उनका ड्रेसको जमाना गएकै हुन त ? यति खेर यो प्रश्न खडा भएको छ । ठूला ठूला कार्यक्रम र फिल्मको पहिलो रोजाई हुने गरेको युवी यस पटक फिल्म द ब्रेक अपमा नमज्जाले चिप्लिएका हुन् । हामीले स्रोतको आधारमा यो जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
कस्टोम डिजाईनर : युवी थापा मगर
यस वारेमा हामीले फिल्मका निर्माता रोहित अधिकारीसँग बुझ्दा उनले आवश्यक केही ड्रेस पोखराकै सपिङ सेन्टरबाट खरिद गरेको स्विकारेका छन् । यस्तै युवी थापा मगरको एउटै ड्रेस कलाकारले छानेनन् भन्ने विषयमा रोहित बोल्न चाहेनन् । पछि उनले फिल्मका गीतहरुको लागि युवीले नै ड्रेस डिजाईन गरिरहेको र फिल्ममा उनैको नाम रहने बताएका छन् । अनमोल केसी देखी साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र सबै स्टारहरुलाई आफ्नो डिजाईन पहिराई सकेका उनको डिजाईनलाई द ब्रेकअप का कलाकारहरुले भन्ने ब्रेकअप नै गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सबै ड्रेसमा लेडर प्रयोग गरिएकोले कलाकारहरुले लगाउन नमानेका हुन् । यूवीको ड्रेस बिक्न छोडेका हुन् या डिजाईन पनि कपि हुँदै आएका हुन् त्यो भने उनैलाई थाहा होला ।
उनले भने यो विषयमा छोटो समयमा काम गर्नुपरेको कारण चाँडो काम गरेको र केही कुरा साँचो भएपनि सबै कुरा साँचो नभएको दावी गरेका छन् । पछिल्लो समय ईन्टुमिन्टु लण्डनमा, कृ लगायत दर्जनौं फिल्ममा उनले कस्टोम डिजाईनरको रुपमा काम गर्दै आईरहेका छन् । फिल्ममा आशिरमान देशराज जोशी, सलोन बस्नेत, शिल्पा मास्के, ईच्छा कार्की लगायतको भुमिका रहने छ । फिल्ममा रोहितसँगै दीपक खतिवडा, रेनु राना र रुपक थापाले लगानीमा साझेदारी गरेका छन् । नरेन्द्र मैनालीले खिच्ने फिल्ममा विशेष पाण्डे, बिराज गौतमको संगीत रहनेछ भने कोरियोग्राफी कविराज गहतराजको रहनेछ । फिल्मलाई हेमराज बिसीले निर्देशन गर्दैछन् ।